ब्रोडलिङ्कको फाइबर इन्टरनेट: शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी
निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनि ब्रोडलिङ्कले घरायसी प्रयोजनको लागी विभिन्न इन्टरनेट प्याकेज भिन्न स्पिडको प्याकेजमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दैआइरहेको छ। कम्पनीले फाइबर तार मार्फत बिभिन्न स्पिडमा इन्टरनेट प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो प्याकेज प्रयोग गर्न १ महिने, ३ महिने, ६ महिने अथवा १२ महिने अबधिको प्याकेज अनुसार इन्टरनेट जडान गर्न सकिनेछ।
ब्रोडलिङ्कले निम्नानुसारको इन्टरनेट प्याकेज ग्राहकलाई प्रदान गर्दैआइरेको छ।
ब्रोडलिङ्कको यस प्याकेज अन्तर्गत 20 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकले प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। 13 GB डाटा प्रति दिन प्रयोग गर्न मिल्ने यो प्याकेजमा त्यसपछि स्पिड घटेर5Mbps को स्पिडमा पुग्नेछ। यो प्याकेज अन्तर्गत ग्राहकले १ महिने, ३ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
स्टाटर प्याकेजको मूल्य सम्बधि सम्पूर्ण जानकारी
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १३५० /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ३९५० /-,ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १२, ७०० -, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
*माथि उल्लेख भएको शुल्कमा कर समाबेश गरेको छैन।
ब्रोडलिङ्कको यस प्याकेज अन्तर्गत 35 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकले प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। 18 GB डाटा प्रति दिन प्रयोग गर्न मिल्ने यो प्याकेजमा त्यसपछि स्पिड घटेर5Mbps को स्पिडमा पुग्नेछ। यो प्याकेज अन्तर्गत ग्राहकले १ महिने, ३ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
रोबस्ट प्याकेजको मूल्य सम्बधि सम्पूर्ण जानकारी
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १, ४०० /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ४, १०० /-,ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १३, ३०० -, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
ब्रोडलिङ्कको यस प्याकेज अन्तर्गत 45 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकले प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। 22 GB डाटा प्रति दिन प्रयोग गर्न मिल्ने यो प्याकेजमा त्यसपछि स्पिड घटेर5Mbps को स्पिडमा पुग्नेछ। यो प्याकेज अन्तर्गत ग्राहकले १ महिने, ३ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रिमियम प्याकेजको मूल्य सम्बधि सम्पूर्ण जानकारी
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १, ५०० /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ४, ४०० /-,ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १४, ५०० -, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
कार्यालय प्रयोजनको लागी ब्रोडलिङ्कको 45 Mbps स्पिड इन्टरनेट: शुल्कसहित सम्पूर्ण जानकारी
ब्रोडलिङ्कले कार्यालय प्रयोजनको निम्ति 45 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ। बिजनेस प्याकेजको सुबिधा चाहि इन्टरनेट बिसेस कारणबस...
कार्यालय प्रयोजनको लागी ब्रोडलिङ्कको 35 Mbps स्पिड इन्टरनेट: शुल्कसहित सम्पूर्ण जानकारी
ब्रोडलिङ्कले कार्यालय प्रयोजनको निम्ति 35 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ। १५ जना प्रयोगकर्ताहरुको लागी अति उतम रहेको...
ब्रोडलिङ्कले कार्यालय प्रयोजनको निम्ति 25 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ। १० जना प्रयोगकर्ताहरुको लागी अति उतम रहेको...
अहिलेको समयमा प्रत्येक अफिसमा इन्टरनेट प्रयोग त स्वाभाविक नै छ। जुनसुकै कामको लागी पनि इन्टरनेट अति आबश्यक भैसकेको छ। इन्टरनेट...
ब्रोडलिङ्कको 20 Mbps फाइबर इन्टरनेट प्याकेज (स्टाटर प्याकेज): शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी
ब्रोडलिङ्कको 35 Mbps फाइबर इन्टरनेट प्याकेज (रोबस्ट प्याकेज): शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी
ब्रोडलिङ्कको 45 Mbps फाइबर इन्टरनेट प्याकेज (प्रिमियम प्याकेज): शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी
क्लासिक टेक वर्ल्डलिङ्क नेपाल टेलिकम वेबसर्फर डीसहोम भायनेट एनसेल ब्रोडलिङ्क सुबिसु
एनसेलको बिजनेस पकेट वाइफाई: मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी